नर्ससँगको ‘अवैध’ प्रेम ! - Deshko News Deshko News नर्ससँगको ‘अवैध’ प्रेम ! - Deshko News
काठमाडौं । करुणामय भावना हो प्रेम । प्रेम दुई आत्माको मिलन हो । मानवीय जीवनको अन्तिम आनन्द र खुसि प्रदानगर्ने महत्वपूर्ण तत्व हो प्रेम । मानिसहरुको अन्तिम खुसि नै प्रेम हो । एदाकदा प्रेम झुठो हुन्छ तर जुठो हुँदैन । प्रेमका अनेकन हाँगाहरु हुन्छन् । समय र परिस्थितिहरुले हागाँहरु झार्छ र पलाउनेमा परिणत गराईदिन्छ । तर प्रेमको जरा आयू रहेसम्म रहिरहन्छ । त्यसैले भनिएको होला ‘पहिलो माया भनेको पहिलो माया हो ।’